आर्थिक संक्रमणमा सहयोग गर्न चाहन्छौं
विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) का कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लार्स एच थनेलले नेपाल भ्रमण गरे । भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई लगायत उच्च अधिकारीलाई भेटेका थनेलले नेपालमा लगानी ६ गुणासम्म बढाउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । पहिलोपटक भएको समूहको निजी क्षेत्र हेर्ने संयन्त्र आइएफसीका प्रमुखसँग कान्तिपुरका गोकर्ण अवस्थीले गरेको कुराकानी—
प्रधानमन्त्री सहित सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीसँगको भेट कस्तो रह्यो ?
हामीले लगानी बढाउन चाहेको कुरालाई उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो । जलविद्युत् लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा रहेको वित्तीय आवश्यकताबारे कुरा गर्‍यौं जसलाई पूरा गर्न ठूलो विदेशी पुँजी चाहिन्छ । यसमा अन्य मुलुकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कसरी राखिराख्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ । अन्य मुलुकमा पनि जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । यस्ता प्रसंगमा छलफल भयो जुन ज्यादै सकारात्मक छ । केही बैंकको क्षमता विस्तार गर्न सेयर लगानीबारे पनि हामीले कुरा राख्यौं ।
महिला उद्यमी, जलविद्युत् उत्पादक र निजी क्षेत्रलाई थप सहयोग गर्न खोज्नुभएको हो ?
दैनिक १२ सय व्यक्ति बिदेसिइरहेको मुलुकको विशेषखाले अवस्था छ । यसको अर्थ धेरै गाउँमा महिलाले परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्नुपरेको छ । त्यसैले हामीले साना तथा मझौला उद्योगलाई मात्र नभएर महिला उद्यमीलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।
केही मुलुकमा महिलाका लागि वित्तीय मात्र नभएर क्षमता अभिवृद्धि र तालिममा पनि सहयोग गरेका छौं । यसबारे एउटा बैंकसँग छलफल पनि चलिरहेको छ ।
२००८ पछि आइएफसी लगानी गर्नुमा भन्दा पनि परामर्श सेवा दिनमा बढी केन्दि्रत देखिन्छ । यो के कारणले होला ?
मेरो विचारमा दुवैको साझेदारी छ । हामी धेरैजसो द्वन्द्वपछिको अवस्थामा रहेका मुलुकमा आफूलाई पाउँछौं । त्यसैले पहिलो काम परामर्श सेवा दिन्छौं । यसबाट हामीले केही गम्भीर विषयमा सहयोग पुर्‍याएर लगानीको वातावरण, नियमनसँगै सरकारसँग विश्वासको वातावरण बनाउन पाउँछौं । साथै निजी क्षेत्रबारे जानकारी पनि पाइन्छ । त्यसपछि अर्को चरणमा प्रवेश गर्न तयार हुन्छौं । नेपालमा सोही चरणमा हामी प्रवेश गर्दै छौं । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले संविधानका विषय टुंगोमा पुर्‍याएर विकास केन्दि्रत हुने र आर्थिक रूपान्तरणमा जाने बताउनुभएको छ ।
विश्वका अधिकांश क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने धारण आइसकेको छ । हामी ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र नभएर साना तथा मझौला उद्योगका साथै पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि र खाद्य प्रशोधनका बारेमा पनि धेरै छलफल भएको पाउँछौं ।
तपाईहरूले सेयर लगानीको कुरा गर्नुभएको छ । केही लघुवित्त क्षेत्रमा पहिलेबाटै लगानी गर्नुभएको छ । अब वाणिज्य बैंकमा पनि लगानी गर्न इच्छा देखाउनुभएको हो ?
हामी राम्रा बैंकमा सेयर लगानी गर्न चाहन्छौं भनेको हो । त्यो बैंकको पुराना समस्या समाधान गर्न नभई भविष्यमा वृद्धि पाउन गरिने हो । हामीले यस्तो लगानी धेरै मुलुकमा गरेका छौं र यहाँ पनि गर्न चाहन्छौं । हामी बैंकिङ प्रणालीलाई आर्थिक प्रणालीको रगतका रूपमा हेर्छौं । हामी साना तथा मझौला उद्योगमा सीधै लगानी गर्छौं वा बैंकलाई कार्यक्रम बनाएर लगानी गर्न सहयोग पुर्‍याउँछौं । हामी यस्तो लगानीका जोखिम पनि बैंकसँग बाँड्न सक्छौं ।
आइएफसीले आफ्नो लगानी ३ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब २५ करोड) बाट बढाएर ३० देखि ४० करोड डलर (करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ) पुर्‍याउन लागेको सुनेका छौं । के यो सही हो ?
म अहिले कुनै पनि वाचा गर्न चाहन्नँ । तर मैले हामी ठूलै मात्रामा लगानी बढाउँछौं भनेको छु । यो आर्थिक वातावरण र राजनीतिक अवस्थामा निर्भर हुन्छ । मैले छोटो समयमा हामी १० करोडदेखि २० करोड डलर (करिब १६ अर्ब रुपैयाँ) सम्म जान सक्छौं भनेको छु । सरकारले लगानी र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र श्रम संगठनले रचनात्मक काम अघि बढाउने हो भने वैदेशिक लगानी आकषिर्त गर्न सकिन्छ । म पक्का छु यस्तो अवस्था आए माथि भनिएको भन्दा ठूलो लगानी ल्याउन सक्छौं ।